Kaamalaa Haaris Dorgommii Prezidaantii Itti-aantuuf Kaadhimamuu Isaanii Simatan
Kaleessa jechuun, Roobii galgala yeroo Korri Biyyoolessaa Paartii Dimmookiraatotaa guyyaa sadaffaaf geggeessametti, Senaatarri Kaalifoorniyaa Kamaalaa Haaris, kaadhimama dorgommii itti-aantuu prezidaantummaa ka sirnaan simatan yoo tahu, haasawa galgala sanaa irratti dhimmoonni itti fuuleffataman waa’ee hookkara qawwee, jijjiirama qilleensa naannoo fi KOOVID 19 ture. Ka dorgommii prezidaantummaaf kaadhimaman, Joo Baayiden waliin dimookiraatota bakka-bu’anii dorgommuuf jiran – Harris.
Maayik Sulivaan akka gabaasetti, korri sun guutummaatti “Virtual” yokaan tekinooloojii marsaa interneetiin ka geggeessame yoo tahu, namoonni dubbatan baay’een yeroo Republikaanticha prezidaantii biyyaa – Donnaald Traamp komatan dhaga’amee jira.
Keessummoonni Kabajaa fi deggertoonni Koricha irratti afeeraman guutummaa Yunaayitid Isteetis keessa jiran martinuu, sabaa Vaayirasii Koronaaf jecha, bakkuma jiran irraa tekinooloojii interneetiitiin kan hirmaatan yoo tahu, keessumsiistuun korichaa – taatoon Holiiwuud, Keerii Waashington “Korri bara kanaa kora haala hin baratamneen geggeessamaa jiru,” jedhan.
Dubartiin Ameerikaa makaa gurraachaa fi hidda Ashiyaa Kibbaa, sadarkaa itti-aantuu prezidaantummaatti kadhimamuun filannoo prezidaantummaa Ameerikaatti hirmaachuunis waan eegame hin turre. Gabaasaa guutu caqasaa.
Ameerikaa Isee Wayyooftuu Duraan Beeknutti Deeb’uuf Haa Qabsoofnu: Kamala Hariis
"Tarkaanfiin Humnoonni Nageenyaa Oromiyaa Keessatti Fudhatan Ka Gitaa Oliiti"
Hagayitii ji’a jara lubbuu ufi jibbaatee waraanaa fi balaa uumamaa jidduu yaa’ee lubbu namaa oolchuuf hojjatu itti ulfeessan